Miixuu: Hojii egereen fiilmii Afaan Oromoo abdachiisaa ta'uu akeeke - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Miixuu
Fiilmiin 'Miixuu' jedhu Dilbata darbe Finfinnee galma Aadaa Oromootti eebbifame egereen industirii fiilmii Afaan Oromoo abdachiisaa ta'uu agarsiiseera jedhan ogeessonniifi hirmaattonni fiilmichaa.
Barreessaafi daarekterri fiilmichaa dargaggoo Biqilaa Asfaaw bu'aa ba'ii 'Miixuu' hojjechuuf keessa darbe BBCf yeroo ibsetti taatota hanga ammaatti hin kaffaliiniif jiruuf hojii ofii isaa hojjete osoo hin shallagiin qarshii 300,000 akka itti baase dubbata.
Fiilmiin sa'aa 1:50 dheeratuu kuni taatee bara Dargii keessa rawwatame ka'umsa godhachuun seenaa maatii tokkoo hima.
Yaaddoon haadha ilmoon jalaa baddeefi qorumsi jireenyaas dhimmoota fiilmi Miixuu keessatti ka'an keessaa tokkodha.
Rakkoo hojii isaa keessatti isa mudate ijoonis meeshaa guutuu kan akka istuudiyoo pirodaakshiniifi dhaabbileen fiilmii Afaan Oromoo ispoonsara gochuuf amanta dhabuu akka ta'e dubbata Biqilaan.
Rakkoo jiran kana mo'achuun ogeessota jiru jedhamaniifi taatota buleeyyii akkasumas isoonsara dhaabbileen guddinaafi dagaagina fiilmii Afaan oromoof aantummaa qaban hirmaachisee milkeesseera Biqilaan.
"Fiilmichi jaalalaafi siyaasa dhokataa of keessaa qaba," kan jedhu barreessaafi qopheessaan fiilmichaa dargaggoo Biqilaa , naannoo Amaaraatti magaala Kamisee dabalatee godinaalee Oromiyaa garaagara keessatti agarsiisuuf karoorfachuusaa BBC'tti himeera.
Soolan Adimaasuu fiilmii 'Miixuu' kana keessatti hiiroodha ykn qooddataa cimaadha. Diraamaa dheeraa 'Dheebuu' keessattis maqaa 'Guddaa' jedhamuun kan beekamu Soolan, waa'ee fiilmii kanaa BBC'tti himeera.
Miixuu maaltu adda taasisa?
Fiilmiin 'Miixuu' fiilmiiwwan Afaan Oromoo hanga ammaatti hojjetaman keessaa waan baayyeen adda isaa taasisa kan jedhu Soolan akkas ta'e jedhee akka hin yaadne dubbata. Akka inni jedhutti, seenaa fiilmii kanaa baayyee gaarii kan ta'eefi kaameraa sadarkaa isaa eeggateen waan hojjetameef qulqullina gaarii qaba.
Daarikterri fiilmii kanaa Biqilaan hojii gaarii akka hojjete kan himu Soolan, 'Miixuun' seenaa isaarraa kaasee, akka inni itti ijaaramee, bilchinni ittiin hojjetameefi akkaataa ittiin daayirekti ta'ellee adda isa taasisas jedheera.
Bakki filatamee itti hojjetames horii qusachuudhaaf bakuma argameti kan waraabame osoo hin taane bakkuma sirriitti waan ta'eef hedduu miidhagaadha jedha.
Kan biraan kan 'Miiixuu' adda taasisu, ispponsera kanaan dura hin baramne sadan arfan tokko qaba jedha Soolan. "Kun ammoo akka mucaan kun dabalee hojjetuuf kaka'umsa ta'aaf jedheen yaada."
Shaakala irraa kaasee hedduu itti dadhabamuu kan dubbatu Soolan, "akkaataa taatonni itti filataman, waanti hundumti sagaleefi qulqullina pirodaakshinii dabalatee fiilmii Afaan Oromoo kanaan dura hojjetamerraa adda isa taasisa," jedha.
Soolan, namoonni eebba fiilmichaa irratti argaman hanga yaadameen ol hedduu akka ta'e yaadatee, yaadni namoonni kennaniifis kan isaan gammachiise ture jedha. "Galmi nuti qabnu lachuu guutee kaan dhaabbatanii daawwachaa turan kaan ammoo bakkallee dhabanii deebiyan galan. Kun ammoo waan nama gammachiisudha."
Fiilmiin 'Miixuu' namni dhimmee hojjechuu danda'u akka sadarkaa addunyaatti dorgomuu danda'u abdii guddaa namatti agarsiisa jedha Soolan.
Yoomis Gonfaa ammoo Ediitera filmii 'Miixuu'dha. Yoomisillee diraamaa Afaan Oromoo dheeraa 'Hiree' jedhu OBN irratti darbaa jiruu dabalatee diraamaawwan gaggabaaboo akkasumas fiilmii gara garaa gulaaleera.
Fiilmii 'Miixuu' dhugoomsuudhaaf hedduu akka dhimman dubbatee, "Yaada namoonni eebba fiilmichaarratti kennaa turan firii dadhabii keenyaatti akka gamadnu nu taasisedha," jedha Yoomis.
Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaaf
Namoonni fiilmicha ilaalan hedduun 'Fiilmii sadarkaa fiilmiin Afaan Oromoo irra jiru gulantaa tokko ol guddise' jechuun dinqisiifannaa isaanii marsaalee hawaasaa irratti ibsataa jiru.
"Fiilmiin MIIXUU fiilmii baay'ee bareedaafi waan baay'ee irraa barreedha" jechuun fuula 'Facebook' isaarratti kan barreessee ogeessi fiilmii Qalbeessaa Magarsaa, ogeessonni ogummaa kanatti bobba'an waan bareeda irraa baratu jedhaan yaada jedheera.
Walumaa galatti fiilmiin kun si'oomina artii Oromoo akka dabalu kan taasise ta'uu dubbatanii, ogeessonni gita gitaan jiran kaan ifaa ifarratti, kan barreessu barreessuu irratti, kan sagalee sagalee irratti xiyyeeffatanii yoo hojjetaa deeman fiilmiin Afaan Oromoo kana caalaa foyyaa'aa deema jedhan.
Dargaggoo Biqilaa Asafawu diraamaa raadiyoo 'Imimmaan jaalalaa' fi kan televiziyoonaa 'Har'i boru miti' jedhan barreessun beekkama.
Fiilmiin 'MIIXUU' namoonni Afaan Oromoo hin beekne akka daawwataniif jecha afaan Ingiliffaan jalatti hiiknis kennamuu himeera darggaggoo Biqilaa.
Fiilmii kana keessatti artiistotni buleeyyiifi haaraan kan hirmaatan yommuu ta'u, artistota buleeyyi keessaa Abbabach Ajjamaa, Humneechaa Asaffaa, Zinnaash Olaaniifi Soolan Admaasuu ni argamu.
Viidiyoo Biyya kanatti wanti salphaadha jedhee yaadu, baqataa jedhamee waamamuu qofa.